STOP BURYING YOUR HEAD IN THE SAND, TAJAMUKA TELLS GOVT newsdzeZimbabweNewsdzeZimbabwe
STOP BURYING YOUR HEAD IN THE SAND, TAJAMUKA TELLS GOVT
Pressure group Tajamuka/Sesjikile says government should quickly address the demands of protesters and stop burying their heads in the sand, claiming the resistance is a Western-sponsored agenda.
The group’s spokesperson Hardlife Mudzingwa said Zimbabweans were hard-pressed and in urgent need of change without the backing of western powers.
His remarks come as government continues to brand those who demonstrate against increasing joblessness and rising poverty as “enemies of the State”, “agents of regime change” and “western-sponsored groups” bent on courting international intervention in Zimbabwe’s internal affairs.
“This is not new to Zimbabweans whom the Zanu PF government has for the past 36 years insulted through implicit statements which portray people as some machines who are commandeered from outside and cannot think for themselves,” Mudzingwa said.
“It is a fact that neither Britain nor USA promised 2,2 million jobs — which the youths are demanding — in the run-up to the 2013 harmonised elections, neither did they craft Statutory Instrument 64 of 2016 which has closed livelihoods for cross-border traders and the informal sector.”
“The USA and Britain did not instruct the police to mount numerous roadblocks which are cash cows for local police stations and Zanu PF neither did the USA or Britain steal the $15 billion diamonds money that Mugabe himself openly said is missing,” he said.
He added that corruption charges stalking Local Government minister Saviour Kasukuwere and Vice President Phelekezela Mphoko’s stay at Rainbow Towers hotel at the expense of the tax payer had nothing to do with the West.
“So for us the citizens, there is nothing new on all these allegations, what is only new is that sanctions are not blamed on the protests in Zimbabwe,” Mudzingwa said.
He added that the pressure group was a peaceful citizens’ campaign generated by young people in Zimbabwe.
“No amount of intimidation, arrests, assaults, and character assassinations, instilling of fear, de-legitimisation, and criminalisation of the campaign will stop the young people of Zimbabwe,” he said. daily news